Casharkaan English-ka, waxaan ku arki doonaa muxaadarooyin bilaha Ingiriisiga. Waxaan ku qori doonaa layliyo ku saabsan bilo Ingiriisi iyo tusaale jumlado ku saabsan bilo Ingiriisi ah. Mawduuca bilaha Ingiriisida waxaa badanaa lagu dhigaa fasalada 9aad ee dugsiyadeena sare.
Sida Loo Qoro oo Loogu Dhawaaqo Bilaha Ingiriisiga
English Haddii aad bilowday inaad wax barato, mid ka mid ah waxyaabaha ugu horreeya ee aad baran doonto waa inay noqotaa bilo. Sababtoo ah, waa inaan sheegnaa in qiyaasta wakhtiga aad u isticmaali doonto inta badan ganacsiga iyo nolol maalmeedka labadaba waa bilo. Waa in aan nidhaahnaa in aanay wax badan ku kala duwanayn xifdinta bilaha iyo xifdinta maalmaha. Markan, ku baro bilaha ingiriisiga Waxaad samayn kartaa habab waxbarasho oo adiga kuu shaqayn doona. Waa inaan sheegnaa in haddii aad diyaariso kaarar wax ku ool ah, waxaad ku baran doontaa bilaha waqti aad u gaaban. Adigoo xafidaya kaadhadhkan Bilaha Ingiriiska Waxaad wax ku baran doontaa waqti ka yar inta aad malaynayso. Kadib barashada bilaha, waa inaad isku daydaa inaad horumariso xirfadahaaga qoraal. Taasi waa sababta ay tahay inaad mid kasta oo ka mid ah bilaha u dejiso jumlad. Sideed u jeclaan lahayd inaad isla eegtaan bilaha Ingiriisiga?
January: Janaayo, bisha koowaad ee sanadka; Waxaa loo qoraa sida "Janaayo" Ingiriisi. Ku dhawaaqistiisu waa ce-nu-e-ri.
February: Febraayo, bisha labaad ee sanadka; Ingiriisi"Februaryloo yaqaan “. Haddii aad la yaabban tahay sida loogu dhawaaqo Febraayo, waa inaan nidhaahnaa waa feb-ru-e-ri.
Mart: March, oo ah bilowga gu'ga; Ingriiska waxa loo yaqaan "Maarso". Waa inaan muujinnaa in lagu heeso March.
April: Abriil, bisha afraad ee sannadka, waxay ku qoran tahay Ingiriisiga sida "AprilWaxa loo qoray sida “. Ku dhawaaqiddeedu waa Eyp-rıl.
May: May waa bisha shanaad ee sanadka; Waxa loo qoraa sida "May" oo Ingiriisi ah. Waa in aan sheegno in loo akhriyo sida berry.
June: Juun, mid ka mid ah bilaha ugu kulul sanadka; Ingiriisi June waxaa loo qoray sidii Waa inaan nidhaahnaa waxaa loogu dhawaaqaa cun.
JulyJulaay oo loo qoray sida "July"; Waxa kale oo loogu dhawaaqaa sida cu-lay.
August: Ogosto, bisha siddeedaad ee sanadka; "AugustWaxa loo qoray sida “. Waa inaan sidoo kale sheegnaa in loo akhriyay sida O-gust.
SeptemberSebtembar, oo ah bilowga dayrta; Ingiriisi September waxaa loo qoray sidii Aad bay u fududahay in la akhriyo! Waxaad ugu dhawaaqi kartaa sida sep-tem-bir.
October: Oktoobar, bisha labaad ilaa bisha ugu dambeysa ee sanadka; Waa inaynu nidhaahnaa iyadoo Oktoobar Ingiriisi loo qoray, waxa loogu dhawaaqaa ok-to-bir.
NovemberNoofembar, oo loo qoray sidii Noofambar; Waxaa loogu dhawaaqaa no-vem-bir Ingiriisi.
December: Haddii December ay tahay bisha ugu dambeysa ee sanadka. December Waxaa loogu dhawaaqaa sida di-sem-bir.
Hadda, haddii aad rabto, aynu isla aragno bilaha Ingiriisiga iyo ku dhawaaqida bilaha Ingiriisiga oo liis ah:
Bilaha Ingiriisiga iyo Macnaha Turkiga
Janaayo (Jan): Janaayo
Febraayo (February): Febraayo
Maarso (Maarso): Maarso
Abriil (Abriil): Abriil
Ogosto (Agoosto): Ogosto
Sebtembar (Sebtember): Sebtembar
Oktoobar (Oktoobar): Oktoobar
Noofambar (Noofambar): November
December (Dec): December
Bilaha Ingiriisiga iyo Ku dhawaaqida Turkiga
Abriil (Abriil): Ep-rıl
Juun (June): Juun
Ogosto (Ogosto): Ou-gist
Bilaha Ingiriiska Waxaan ku sharixi doonaa tusaale jumlado si aad si fiican u barato!
Tusaalaha jumladaha bilaha ee Ingiriisiga
Janaayo waa bisha koowaad ee sanadka. (Janaayo waa bisha koowaad ee sanadka.)
Walaashayda iga weyn waxay dhalatay Febraayo. (Walaashay waxay dhalatay Febraayo.)
Waxaan ku jirnay karantiil tan iyo bishii Maarso
Abriil waa muhiim sababtoo ah imaatinka guga
Waxaan qorsheynayaa inaan u tago ayeeyday May 2021
Dhalashadaydu waa 10 Juun! (June 10 waa dhalashadayda!)
Kama bixi karo magaalada ilaa Luulyo
Ogosto waa bisha ugu kulul sanadka.
Dugsiyadu waxay bilaabmaan Sebtembar
Aabbahay ayaa qalliin lagu sameeyay bishii Oktoobar
Waxaan soo booqan doonaa hooyaday bisha November
December waa bisha ugu dambeysa ee sanadka
Natiijo ahaan, Bilaha Ingiriiska Si aad si wanaagsan wax u barato, waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa adeegsiga jumladaha. Aad bay u sahlanaan doontaa in la barto haddii aad u turjunto bilaha u dhigma taariikhaha muhiimka kuu ah Ingiriis oo aad maskaxda ku hayso. Taas ka sokow, waxa kale oo aad maskaxda ku hayn kartaa 12ka bilood ee sanadka adiga oo ku odhanaya heeso xanaano ah.
Sidee Si Fudud Loogu Bartaa Bilaha Ingiriiska?
Waqtiyada iyo taariikhaha aad ayey muhiim ugu yihiin wada sheekeysiga maalinlaha ah. Markaad qof kula hadlayso ama wax ugu qorayso Ingiriis, waa inaad taqaan wakhtiyada iyo taariikhaha. Inta shirku socdo, waxa lagama maarmaan noqon doona in la caddeeyo wakhtiga aad la kulmi doonto qof kasta, ama xaaladaha ay lagama maarmaan tahay in la xuso nooc kasta oo taariikheed ah, adoo cayimaya bilaha. Halkaa marka ay marayso, waxa lama huraan ah in aad u barato bilaha Ingiriisiga sida ugu fudud ee suurtogalka ah. Sida aan kor ku soo sheegnay, wax ku ool ah Bilaha Ingiriiska Aad bay faa'iido u yeelan doontaa in la diyaariyo kaararka. Haddaad akhrido oo aad xifdiso bilaha kaadh kasta, waxaad gaadhay hadafkaagii. Ku shaqaynta habkan waxay noqon doontaa labadaba madadaalo iyo waxtar kuu leh.
English Ka dib markaad xifdiso bilaha, waa inaad bilowdaa inaad qorto jumladahaaga si aad u xoojiso qaab qoraalkooda. Waxaad ku baran kartaa bilaha Ingiriisiga sida ugu dhakhsaha badan adiga oo isticmaalaya jumlado sida kuwa sare. Aad bay kuugu fududaan doontaa inaad barato bilaha, gaar ahaan haddii aad xafido oo aad qorto bilaha taariikhaha sida maalmaha dhalashada iyo sannadguurada arooska ee muhiimka kuu ah. Bilaha Ingiriiska mawduuc; Shaki la'aan waa mawduuca ugu fudud uguna xiisaha badan Ingiriisiga. Si aad si fiican u fahamto mawduucan, waxaad sidoo kale isku dayi kartaa inaad wax barato adigoo u qaybinaya bilaha kooxo. Waxaan dhihi karnaa, haddii aad u qaybiso bilaha ay leeyihiin xagaaga, jiilaalka, gu'ga iyo xilliyada dayrta koox koox oo aad wax barato, waxay ahaan doonaan kuwo waara oo maskaxdaada ku jira.
ku baro bilaha ingiriisiga Iyadoo aan loo eegin da'daada, waa inaad isku daydaa barashada qaababka soo jiidashada carruurta. Halkaa marka ay marayso, haddii aad la qabsato heeso madadaalo leh, qaafiyad leh, soo jiidasho leh oo si fudud carrabkaaga ugu dheggan, waxa aad ogaan doontaa sida degdegga ah ee aad u baranayso maaddadan. Barashada bilaha Ingiriisiga Aad bay muhiim u tahay in la sameeyo jumlado tusaale ah inta lagu jiro Si kastaba ha ahaatee, aqoonta dhabta ah ayaa muhiim u ah sida aqoonta aragtida. Waa in aan nidhaahnaa haddii aadan ku dhaqmin, waxaad si dhakhso ah u ilaawi doontaa dhammaan aqoonta aad baratay. Iyo sidoo kale, Barashada bilaha Ingiriisiga Waa inaad sidoo kale u fiirsataa qodobbada soo socda!
Marka hore, waa inaad fiiro gaar ah u yeelataa xaqiiqda ah in xarfaha hore ay tahay in had iyo jeer la weyneeyo marka bilaha Ingiriisiga lagu qorayo. Intaa waxaa dheer, uma baahnid inaad isticmaasho erayo dhan markaad qoreyso bilaha. Si kale haddii loo dhigo, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa soo gaabinta qaarkood. Tusaale ahaan: Waxaad soo gaabin kartaa Jun halkii Juun, Dec halkii December.
soo gaabinta bilaha af Ingiriisi Waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato arrin kale inta lagu jiro habka. Sababtoo ah, Ingiriisiga Ameerika, soo-gaabista waxaa la dhigayaa dhammaadka muddada. Si kastaba ha ahaatee, suurtagal ma aha in la dhigo xilliga dhammaadka soo gaabinta Ingiriisiga Ingiriiska.
Maajo, Juun, Luulyo; Hayso Ingiriis u dhigma sida May, June, July, siday u kala horreeyaan. Inkastoo la sheego in aysan jirin wax soo gaabin ah, gaar ahaan goobaha ajnabiga ah, waxaa jira isticmaalka sida Jun halkii Juun. Waa in aan sheegno in aysan jirin soo gaabintaas May iyo Luulyo.
Layliga Bilaha Ingiriisiga
Bisha 1-aad ee Janaayo
Bisha 2-aad ee December
3-da bisha Juun
Bisha 4-aad ee May
5-ta bisha Febraayo
7-da bisha November
8-da bisha Abriil
9-ka bisha Oktoobar
bisha Ogosto 11
12-ka bisha Sebtembar
Buuxi jimicsiga bannaan
Janaayo, Febraayo, …….
Bisha soo socota waxay noqon doontaa March. Si kale haddii loo dhigo, galay meel bannaan March waa inay yimaadaan.
Bisha soo socota waxay noqon doontaa May. Si kale haddii loo dhigo, galay meel bannaan May iman doona.
Abriil, Maajo, ……
Bisha xigta waxay noqon doontaa Juun. Si kale haddii loo dhigo, galay meel bannaan June waa inay yimaadaan.
Bisha xigta waa inay noqotaa Julaay. Si kale haddii loo dhigo, galay meel bannaan July waa inay yimaadaan.
Bisha xigta waa inay noqotaa Ogosto. galay meel bannaan August waa inay yimaadaan.
Bisha xigta waa inay noqotaa Sebtembar. galay meel bannaan September waa inay yimaadaan.
Bisha xigta waa inay noqotaa Oktoobar. galay meel bannaan October waa inay yimaadaan.
Bisha soo socota waa inay noqotaa November. galay meel bannaan November waa inay yimaadaan.
Bisha xigta waa inay noqotaa Disembar. galay meel bannaan December waa inay yimaadaan.
Ku celceli qiyaasida bilaha Ingiriisida
Waa bisha koowaad ee sanadka. Waxay qaadataa 31 maalmood.
Jawaabta saxda ah waa inay noqotaa Janaayo. Si kale haddii loo dhigo, January!
Bishan oo afartii sanaba mar leh 29 maalmood, waa bisha labaad ee sanadka.
Jawaabta saxda ah waa inay noqotaa Febraayo. February waxaan dhihi karnaa!
Bishan, oo astaan ​​u ah imaatinka gu'ga; Waxa kale oo lagu yaqaan qabowga.
Jawaabta saxda ah waa inay noqotaa Maarso. Si kale haddii loo dhigo, March!
Maalinta Qaranimada iyo Dhallaanka ayaa bishan la xusayaa, taasoo caan ku ah ubaxyada ubaxa iyo shimbiraha ciyaya.
Jawaabta saxda ah waa inay noqotaa Abriil. April Waa inaan ka jawaabnaa.
Bishan, oo ah bisha ka horreysa bilaha xagaaga; Waxay qaadataa 31 maalmood.
Jawaabta saxda ah waa May. May waa in ay ahaataa.
Bishan, oo ah bisha koowaad ee xilliga xagaaga, dugsiyadu waxay sidoo kale galaan fasaxa xagaaga.
Jawaabta saxda ah waa Juun. June waa in loo qoraa sida
Bishan, oo leh 31 maalmood, waxaa la arkaa kulayl daran. Waa bishii labaad ee xagaaga.
Jawaabta saxda ah waa inay noqotaa Julaay. July waa in loo qoraa sida
Bishan, oo ku bishaaraynaysa imaanshaha dayrta, dhirtu waxay bilaabaan inay daadiyaan caleemaha.
Bishaan, sida aad malayn karto, waa Sebtembar. September waa in loo qoraa sida
Waa bisha ugu dambeysa ee sanadka. Waxay qaadataa 31 maalmood.
Inkastoo bisha ugu dambeysa ee sanadka ay tahay December December waa in loo qoraa sida
Waa bisha ugu dambeysa ee xilliga xagaaga. Heerkulka awgeed, waxaan aadnaa badda.
Bishani waa Ogosto. August waa in loo qoraa sida
Bishan, oo cimiladu ay bilaabato inay si tartiib tartiib ah u qaboojiso, waa bisha labaad ee xilliga dayrta.
Sida aad qiyaasi karto, waxaan ka hadlaynaa Oktoobar. October waxaa loo qoray sida.
Inkastoo ay tahay bishii ugu dambeysay ee sanadkan, haddana waxaa la arkayaa roobab mahiigaan ah.
Sida aad qiyaasi karto, bishaan waa November. November waxaa loo qoray sida.
Bisha Keebaa Ku Beegan Bisha Layliska Sanadka
December waa …… bisha sanadka.
Julaay waa …… bisha sanadka.
Janaayo waa….. bisha sanadka.
Oktoobar waa….. bisha sanadka.
Maarso waa …… bisha sanadka.
Abriil waa … bisha sanadka.
Sebtembar waa….. bisha sanadka.
Febraayo waa ….. bisha sanadka.
Juun waa…. bisha sanadka.
May waa…. bisha sanadka.
Ogosto waa…. bisha sanadka.
Noofambar waa ….. bisha sanadka.
Waxaad ka heli kartaa jawaabaha saxda ah hoos:
Waa inaad isku daydaa inaad si sax ah uga jawaabto layliyada soo socda.
….. waa ka bisha ugu gaaban (jawaab sax ah: Febraayo)
Waxaa jira …. bilo sanad gudihiis. (jawaab sax ah: 12)
…… waa bilaha xagaaga (jawaab sax ah: Juun, Luulyo, Ogosto)
Bisha ugu dambeysa ee sanadka waa …… (jawaab sax ah: december)
Bisha koowaad ee dayrta waa….. (jawaab sax ah: sebtembar)
Ogosto waa ….. bisha sanadka. (jawaab sax ah: 8aad)
Maalinta Jacaylka (Valentine's Day) waxay ku jirtaa…. (jawaab sax ah: Febraayo)
Sidee loo xafidaa Ingiriisiga?
Baro bilaha ingiriisiga sida ugu dhakhsaha badan Haddii aad rabto, waa inaad xafiddaa. Halkaa marka ay marayso, xifdinta Ingiriisigu way ka fududahay sidaad u malaynayso! Kaliya barashada bilaha ingiriisiga Talooyinka soo socda aad bay faa'iido kuugu yeelan doonaan, ma aha oo kaliya barashada luqadda, laakiin sidoo kale barashada luqadda.
ingiriisiga xafid Waa inaad wax badan akhridaa haddii aad rabto. Haddii aad akhrido agabka Ingiriisiga ee aad hesho, erayadaadu way fiicnaan doonaan. Haddii ay dhibaato kaa haysato xifdinta erayada Ingiriisiga, waa inaad isku daydaa inaad akhrido meel kasta oo qoran oo aad gacantaada ku heli karto, hadday tahay buug, wargeys ama majallad. Markaad akhrinayso agabka noocaas ah, waxaad la kulantaa kelmado cusub adoon ogaanin. Intaa waxaa dheer, waxaad xafidi doontaa erayada aad taqaan. Intaa waxaa dheer, adigoo baranaya macnaha erayada aan la aqoon ee qaamuuska, waxaad sidoo kale hagaajin doontaa erayadaada.
ereyga ingiriisiga Markaad xifdinayso, waa inaad ka taxadirtaa doorashada erayada. Si kale haddii loo dhigo, waa inaad marka hore barataa ereyada kuugu xiisaha badan. Waxaad sidoo kale codsan kartaa habkan markaad baranayso bilaha Ingiriisiga. Tusaale ahaan, waxaad baran kartaa bil ka hor, ku dhawaaqida taas oo aad jeceshahay. Ka sokow, bisha leh dhalashadaada ama Maalinta Jacaylka waxay noqon doontaa mid cajiib ah sida bil kuu sahlan inaad barato.
xafid erayada ingiriisiga si kasta oo uu falku muhiim u yahay, waxa ka muhiimsan in aad isticmaasho erayada aad baratay. Si aanad u iloobin oo aad u xoojiso ereyada Ingiriisiga ah ee aad xafidday, waa in aad si joogto ah isugu daydaa in aad u isticmaasho jumlado. Halkaa marka ay marayso, waa in aad qortaa bilaha aad baratay Ingiriisiga oo aad jumlad ku isticmaasho. Marka la eego qaabka shaqada ee maskaxda, waxaa lagama maarmaan ah in la xafido ereyga la bartay si loo xasuusto. Si loo xafido, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo kelmadda laga hadlayo.
Waa in aad ka taxadirtaa in aad wax ku qorto marka aad xifdinayso bilaha af Ingiriisi. Waa inaad ka buuxisaa jawiga shaqada, qolkaaga, kumbuyuutarka, miiskaaga qoraallo ku dhejisan. Waad ku mahadsan tahay qoraallada dhejiska ah, waxaad baran doontaa erayada sida ugu dhakhsaha badan. Markaad waqti ku qaadato deegaankaaga shaqada, indhahaagu waxay si badheedh ah u tegi doonaan qoraallada aad qaadatay. Sidan, miyir la'aan barashada bilaha ingiriisiga waxaadna heli doontaa fursad aad ku xafido.
Markaad baranayso bilaha Ingiriisiga, sidaan kor ku sheegnay, waa inaad isku daydaa inaad shaqadan ka dhigto mid madadaalo leh. Hadii aad isku daydo in aad wax ku xifdiso qaab qaafiyad, waxa aad noqonaysaa qofka ka macaasha shaqadan. Ka sokow, waa inaad ciyaareysaa ciyaaro badan. English Waxaa jira codsiyo mobilada oo kuu ogolaanaya inaad wax barato. Codsiyadan, waxaad ku fududayn kartaa inaad barato bilaha Ingiriisiga adiga oo ciyaaraya ciyaaraha iyo samaynta jimicsiga maalintii.
Ingiriisi, oo ah luqadda ay ku hadlaan malaayiin qof oo ka yimid Yurub ilaa geesaha ugu fog Aasiya iyo Afrika; meel muhiim ah ayuu ku leeyahay nolosheenna. Maalmahan oo aan ku jirno 2020-meeyada, musharraxa booska qalin-jabinta cusub kuma hadlo Ingiriis wareysiyada shaqada; macneheedu waxa weeye in aanu fursad ka hor istaagin musharaxiinta kale. Ka sokow, Ingiriisi; Waxa kale oo ay door firfircoon ka qaadanaysaa nolosheenna waxbarasho marka la joogo 90-meeyadii. Thanks to Anatolian High School, dad badan oo ku nool Turkiga barashada Ingiriisida fursad u helay. Sidoo kale, maalmahan barashada Ingiriisida da'du waxay hoos ugu dhacday heerka barbaarinta. Turkiga; Waxay ujeedadeedu tahay inay ka mid noqoto waddamada ugu horreeya Yurub xagga waxbarashada Ingiriisiga.
Iyadoo la raacayo yoolalka Midowga Yurub ee waddankeena, waxaan dhihi karnaa in waxbarashada luqadda ajnabiga ah, gaar ahaan Ingiriisiga, ay tahay mid aad lagama maarmaan u ah. Sagaashamaadkii iyo qeybtii hore ee 1990-meeyadii English Casharradii English-ka oo ahaa macalimiin la’aan awgeed, ayaa hadda noqday duruus ay ardaydu si buuxda u qaataan oo ay wax badan ka bartaan. Waxbarashada Ingiriisiga waxaa lagu hagaa dhinacyo kala duwan, gaar ahaan xagga naxwaha iyo erayada. Ardayda waxaa sidoo kale la siiyaa fursad ay naftooda ugu horumariyaan akhriska, hadalka, qorista iyo shuruudaha dhegeysiga. Si kale haddii loo dhigo, ardaydu kuma baasayaan casharradan si fudud inay bartaan waqtiyada (tusaale ahaan waqti hore) ama inay xafidaan dhawr eray. Thanks to hawlaha mashruuca, waxay haystaan ​​fursad ay ku bartaan Ingiriisiga si ka sii wanaagsan iyagoo ku hadlaya, qorista qoraallada, dhegeysiga akhrinta tuducyada iyo wada-hadallada, iyo akhrinta iyo xallinta tuducyada akhriska.
English Waa inaan sheegnaa in tignoolajiyadu ay sidoo kale tahay aalad muhiim u ah waxbarashada. Waxaad u mahadcelin doontaa in macallimiinta Ingiriisiga sannadihii la soo dhaafay; Waxay ahayd inuu ardaydiisu ku dhegaystaan ​​cajalado laga duubay. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo ay ugu wacan tahay horumarinta tignoolajiyada, fursadaha ugu fiican ayaa loo adeegsadaa waxbarashada Ingiriisiga. Sidaa darteed, waxaan dhihi karnaa in Ingiriisi ardaydu uu marayo heerkii ugu fiicnaa marka loo eego sannadihii hore. Haddii aad raadiso gaaban Youtube, carruurta da'da dugsiga dhexe waa weli English Waxaad arki doontaa inay duubaan muuqaallo oo ay ku hadlaan lahjad.
Waa maxay sababta Ingiriisku muhiim u yahay?
English Marka la leeyahay ha u malayn inay tahay luqad lagaga hadlo dalal badan oo adduunka ah. Sababtoo ah, luqaddan; Sidoo kale waa luqadda ugu badan adduunka. Sidaa darteed, haddii aad u malaynayso in barashada Ingiriisiga aan loo baahnayn, waa inaad dib u eegtaa fikradahan. Ingiriis si fiican u yaqaan Waa inaad xisaabta ku dartaa in haddii aad hadasho, in noloshaadu noqon doonto mid aad u qaabaysan. Ikhtiyaar badan ayaa ku sugaya xagga tacliinta iyo shaqada labadaba. Ka sokow, waa inaadan u eegin barashada Ingiriisiga inay tahay fursad waxbarasho ama shaqo. Waa af aad wax badan ku soo kordhin karto xagga dhaqanka iyo madadaalada. Fanaanada aad ugu jeceshahay English Dhageysiga heesta ku qoran Ingiriisida iyadoo la fahmayo waxay kaa dhigi doontaa mid aad u wanaagsan. Intaa waxaa dheer, waxaad heli doontaa fursad aad kula xiriirto dadka adduunka oo dhan ka yimid Ingiriisi. Si kale haddii loo dhigo, weligaa keligaa ma dareemi doontid.
English; Waa luuqad aad muhiim u ah labadaba hadafyadaada xirfadeed iyo kuwa gaarka ah. Haddii aad hadda bilowday inaad barato Ingiriisiga, runtii waxaad haysaa sababo badan oo aad ku sii waddo.
English Waa inaad ogaataa in shaqo kasta oo aad la tacaalayso, ay fursado cusub noloshaada ku iman doonaan. Dunida caalamiga ah, shirkado badan ayaa iskaashi la sameeya waddamo ku yaal meelo kala duwan oo adduunka ah. Halkaa marka ay marayso, shaqaale la xidhiidhi kara shisheeyaha ayaa loo baahan yahay. Aqoontaada Ingiriisiga, waxaad heli kartaa shaqo cusub ama waxaad fursad u heli kartaa inaad dalacsiiso gudaha machadkii aad u shaqaynaysay. Intaa waxaa dheer, waxaan dhihi karnaa in boosas kala duwan sida turjumaada iyo turjubaanka, shaqaalaha suuqgeynta ama macalinka luqadda ay ku sugayaan.
TOEFL; Shaki la'aan, waa imtixaan ay dhalinyaro badan oo Turki ah rabaan inay helaan buundooyin sare. Si kastaba ha ahaatee, Ingiriisigaagu waa inuu ahaadaa mid aad u wanaagsan si aad u keento dhibco sare imtixaankan. Dhibcaha TOEFL ee wanaagsan, waxaad iska qori kartaa dugsiyada ku dhawaad ​​meel kasta oo adduunka ah. Waa inaad sidoo kale horumarisaa Ingiriisigaaga si aad ugu gudubto imtixaanada IELTS iyo Cambridge.
English In la akhriyo oo la fahmo runtii waa faa'iido weyn! Waxaan dhihi karnaa in ugu yaraan hal bilyan oo qof oo adduunka ah ay ku qoran yihiin Ingiriisiga internetka. Halkaa marka ay marayso, dadka ku nool meelo kala duwan oo adduunka ah, English Waxay noqon doontaa farxad in la sheekeysto. Miyaysan ahayn wax lagu farxo in qof Nigeria ka socda lagu qoro Ingiriis? Intaa waxaa dheer, mahadda aqoontaada Ingiriisiga, waxaad heli kartaa fursad aad ku akhrido oo aad ku fahamto ilo kala duwan oo internetka ah.
Ilaa hadda, waxaanu ka hadalnay faa'iidooyinka uu Ingiriisku ka helay dhinaca waxbarashada iyo ganacsiga. Si kastaba ha ahaatee, waxaad sidoo kale ka heli kartaa wax badan oo ku saabsan dhaqanka iyo madadaalada haddii aad barato luqaddan. Gaar ahaan CNBC-E, mid ka mid ah kanaalada TV-ga caanka ah ee 2000-meeyadii. taxane English Oo dhammaanteen waxaan rabnay inaan ogaanno Ingiriisiga ku filan si aan u daawano filimada aan qoraal-hoosaadyo lahayn. In kasta oo aysan jirin CNBC-E maanta, waxay ku jirtaa heer wanaagsan in lagu daawado taxanaha ajnabiga ah ee Netflix ama goob kale oo aan lahayn qoraal-hoosaadyo. English Waa lagama maarmaan inaad ogaato.
Ugu dambeyntii, English Waa inaan ka hadalnaa faa'iidooyinka ay leedahay barashada horumarinta maskaxda. Sida laga soo xigtay daraasado ku saabsan waxbarashada luqadda, waxaa la go'aamiyay in luqad cusub ay beddesho qaabka maskaxda. Waxaad la yaabi doontaa markaad barato faa'iidooyinka xaaladdan, taas oo saameynaysa qaybta maskaxda ee mas'uulka ka ah xusuusta iyo fikirka miyir-qabka ah! Si kale haddii loo dhigo, sida aad u malaynayso way isbedeli doontaa haddii aad luqad cusub barato. Marka qaab-dhismeedka maskaxdaadu uu sii xoogeysto, waxaad yeelanaysaa awood aad ku fikirto dhinacyo badan.
Natiijo ahaan, tixgeli naftaada sida ugu dhakhsaha badan, adoo tixgelinaya dhammaan arrimaha kor ku xusan. ku baro bilaha ingiriisiga Waa in aad naftaada dhiirigelisaa!
# Sida Loo Qoro oo Loogu Dhawaaqo Bilaha Ingiriisiga
# Bilaha Ingiriisiga iyo Macnaha Turkiga
# Bilaha Ingiriisiga iyo Ku dhawaaqida Turkiga
# Tusaalaha jumladaha bilaha ee Ingiriisiga
# Sidee Si Fudud Loogu Bartaa Bilaha Ingiriiska?
# Layliga Bilaha Ingiriisiga
# Buuxi jimicsiga bannaan
# Ku celceli qiyaasida bilaha Ingiriisida
# Bisha Keebaa Ku Beegan Bisha Layliska Sanadka
# Sidee loo xafidaa Ingiriisiga?
# Waa maxay sababta Ingiriisku muhiim u yahay?
Tags: 10 bilood oo Ingiriis ah, 9 bilood oo Ingiriis ah, bilo Ingiriisi